၂၀၂၁ ခုနှစ်ဇန်န ၀ ါရီလတွင်အကောင်းဆုံး Forex Trading အက်ပလီကေးရှင်းများ - ကုန်သွယ်ရေးအတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း ၂ ခုကိုလေ့လာပါ
အကောင်းဆုံး Forex Trading Apps 2021 နှင့် 2022။
အဆိုပါ အကောင်းဆုံး Forex ကုန်သွယ် apps များ နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု အရောင်းအ၀ယ် အခင်းအကျင်းသည် အွန်လိုင်း နေရာကို ဝင်ရောက်လာကတည်းက သိသိသာသာ ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။ အဲဒီမတိုင်ခင်အထိ၊ သမားရိုးကျ ကုန်သွယ်မှုပုံစံက သင့်ကိုယ်စား ရာထူးတွေဝင်ဖို့ သင့်ပွဲစားကို ဖုန်းခေါ်ဖို့ လိုအပ်တယ်။ နည်းပညာတိုးတက်မှုများသည် ကလစ်အနည်းငယ်ဖြင့် သင့်ကုန်သွယ်ရွေးချယ်မှုများကို လုပ်ဆောင်ရန် စိတ်ကူးမယဉ်ဘဲ အဆင်ပြေစေခဲ့သည်။
ယနေ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိစ္စသည်ကုန်သွယ်ရေးအက်ပ်များစတင်ခြင်းနှင့်အတူနောက်ထပ်ခြေလှမ်းတစ်လှမ်းလှမ်းလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးကုန်သွယ်ရေးအက်ပလီကေးရှင်းများကသင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းရန်၊ သူတို့၏လှုပ်ရှားမှုများကိုခြေရာခံရန်၊
သင်သည်မည်သည့်နယ်ပယ်ကိုမဆိုအဓိကထားသည်ဖြစ်စေ၊ စတော့ရှယ်ယာများ၊ ညွှန်းကိန်းများ၊ Forex များ၊ ကုန်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ် cryptocurrencies ရှိပါက - သင်သည်ဒိုမိန်းများအားလုံးကိုအစေခံသည့်သို့မဟုတ်ငွေကြေးဆိုင်ရာကိရိယာတစ်ခုအတွက်သီးသန့်အင်္ဂါရပ်များပါသောအက်ပလီကေးရှင်းကိုရှာနိုင်သည်။ အင်တာနက်သည်အဆင့်အမျိုးမျိုးရှိကုန်သည်များ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကျိုးစီးပွားအတွက်သင့်တော်သောရွေးချယ်မှုများစွာရှိသည်။
အခုတော့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းကဘယ် Forex trading app သည်သင့်အတွက်မှန်ကန်သနည်း။ ဤလမ်းညွှန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေရန်ရည်ရွယ်သည်။
Trading Apps ဆိုတာဘာလဲ။
ထောင်နှင့်ချီသောအပ်နှံထားသောမိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းများသည်ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်ဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်နိုင်သည် - ၎င်းသည်ထိုအချိန်ကတည်းကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနယ်ပယ်သို့တိုးချဲ့သွားသည်ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ကုန်သွယ်မှုအက်ပလီကေးရှင်းများကနာမည်ကအကြံပေးသည်။ ၎င်းတို့သည်သင့်အားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရွေးချယ်ရန်နှင့်မိုဘိုင်းပစ္စည်းမှတစ်ဆင့်ထုတ်ယူရန်သင့်အားကူညီသည်။
ယနေ့ခေတ်တွင်ကုန်သွယ်ရေးကိရိယာတစ်ခုနှင့်အင်္ဂါရပ်အားလုံးနီးပါးကို desktop website တွင်သင်ရှာမတွေ့နိုင်ပါ။ သို့ရာတွင်၊ ၎င်းတို့ကို၎င်းတို့သည်လွတ်လပ်သောကိရိယာများအဖြစ်အလုပ်လုပ်ရန်ဒီဇိုင်းမထားကြောင်းစိတ်စွဲမှတ်ထားရန်လိုအပ်သည်။ ယင်းနှင့်ဆန့်ကျင်စွာပင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအနေဖြင့်သင့်အနေဖြင့်ပြည့်စုံသည့်အရစ်ကျ ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုမှသင်ရယူရန်လိုအပ်သောရှုထောင့်အချို့ရှိသည်။
ထို့အပြင်မည်သည့်ကုန်သွယ်ရေးအက်ပ်ဖြင့်သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်သည်အက်ပလီကေးရှင်း၏ကုန်သွယ်ရေးဆိုက်၊ ပေါ်လစီများနှင့်သူတို့၏စည်းကမ်းချက်များအပေါ်မူတည်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်အွန်လိုင်းအကျိုးဆောင်ပလက်ဖောင်းမှတဆင့်သင်ရောင်းဝယ်ဖောက်သည်ဟုဆိုပါစို့။ ထပ်မံအဆင်ပြေစေရန်သူတို့၏ကုန်သွယ်မှုအက်ပ်ကိုသင်အသုံးပြုသည်။ ဤအရာသည်သင့်အားအက်ပ်မှတစ်ဆင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာရွေးချယ်စရာများကိုအသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးကိုပေးသည် သို့သော်၊ အကယ်၍ သင်သည်ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခု၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြည့်စုံသောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဆန်းစစ်မှုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါက၎င်းကိုပင်မ desktop ဆိုဒ်မှတဆင့်အကောင်းဆုံးပြုလုပ်နိုင်သည်။
အရောင်းအဝယ်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာအက်ပလီကေးရှင်းများသည်သင်အမြဲတမ်း desktop ကိုလက်လှမ်းမမီပါကအထူးသဖြင့်အသုံးဝင်သည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းတို့သည်ပွဲစား၏ကျယ်ပြန့်သောအရောင်းအ ၀ ယ်အမြောက်အမြားကိုသင်အလွယ်တကူသွားလာနိုင်ရန်ကူညီပေးသောဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။ သင်၏စမတ်ဖုန်းမှတစ်ဆင့်ကုန်သွယ်မှု site ကိုဝင်ရောက်နိုင်သော်လည်းသေးငယ်သည့်မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားသည် ပို၍ အသေးစိတ်ကျသောသုတေသနနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများကိုပြုလုပ်ရန်ခက်ခဲလိမ့်မည်။
Trading Apps များသည်အရေးကြီးသည်
ကုန်သွယ်ရန်ရရှိနိုင်သည့်ဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာကိရိယာများအားလုံးတွင် Forex သည်ကမ္ဘာ့စျေးအကြီးဆုံးဈေးကွက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မတည်ငြိမ်မှုသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးကွက်များကိုအုပ်ချုပ်ရန်စိတ် ၀ င်စားစရာအကောင်းဆုံးမက်ထရစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
မည်သည့်နေ့၌မဆိုအဓိကငွေကြေးအတွဲတိုင်း၌စျေးကွက်အတွင်းလှုပ်ရှားမှုများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းများသည်အမြဲတမ်းလျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေသောစျေးကွက်များကိုရှာဖွေနေကြသောကြောင့်ဤပိုင်ဆိုင်မှုများသည်ဖြစ်ရပ်များနှင့်အခြားစီးပွားရေးသတင်းများအတွက်အလွန်အမင်းအားနည်းချက်ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, Forex တက်ကြွစွာဝယ်ခြင်းနှင့်ဘဏ္instrumentsာရေးတူရိယာချင်သောသူတို့ကပိုမိုနှစ်သက်သည်။
မတည်ငြိမ်မှုများကြောင့် Forex ကုန်သည်များသည်စျေးကွက်အပြောင်းအလဲများကိုအမြဲတမ်းရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းတို့သည်ဇယားများ၊ ကိုးကားချက်များနှင့်အရာအလုံးစုံတို့ထက်၊ ၎င်းတို့၏ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်များကိုခလုတ်နှိပ်ရုံဖြင့်ရယူနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်အကောင်းဆုံး Forex Trading အက်ပလီကေးရှင်းကိုရှာဖွေခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။
ထိပ်တန်း Forex ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းအားလုံးနှင့်ပွဲစားများအားလုံးနီးပါးသည်သီးသန့်ကုန်သွယ်မှုအက်ပလီကေးရှင်းဖြစ်သည်။ အချို့ကသင့်အနေဖြင့်သူတို့၏ကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းတွင်အကောင့်မရှိဘဲအက်ပ်ကိုသုံးရန်ခွင့်ပြုသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ကုန်သွယ်ရေးနယ်ပယ်ကိုသာကြည့်ရှုနိုင်ပြီး၊ ၎င်းတွင်သတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်များကိုရယူခြင်းပါဝင်သည် MT4.
Forex Trading App ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ။
ကုန်သွယ်ရေးအက်ပ်တစ်ခုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အွန်လိုင်းကုန်သွယ်ရေးဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်အလွန်ကွာခြားသည်မဟုတ်ပါ ၎င်းတို့တွင်တူညီသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်သင်၏အကောင့်ကိုတည်ဆောက်ပုံအတူတူဖြစ်သည်။ တစ်ခုတည်းသောသိသာထင်ရှားသည့်ခြားနားချက်မှာ interface နှင့်သင်ပလက်ဖောင်းကိုမည်သို့ဖြတ်သန်းသွားမည်ဖြစ်သည်။
ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်မိုဘိုင်းကုန်သွယ်ရေးအက်ပ်မှတစ်ဆင့်သင်၏ Forex ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအလုပ်ကိုမည်သို့စတင်နိုင်သည်ကိုတစ်ဆင့်ချင်းလမ်းညွှန်တစ်ခုပေးသည်။
၁။ အကောင်းဆုံး Forex Trading App ကိုရှာပါ
ကုန်သွယ်ရေးအက်ပ်တိုင်းတွင်တူညီသောအင်္ဂါရပ်များရှိသည်။ သို့သော်၎င်းတို့အားလုံးသည်ထူးခြားပြီးတန်ဖိုးနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကွဲပြားသည်။ သင်၏ပထမဆုံးခြေလှမ်းသည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုပုံစံနှင့်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သောအကောင်းဆုံး Forex trading app ကိုဖော်ထုတ်ရန်ဖြစ်သည်။
ဤလမ်းညွှန်၏နောက်အပိုင်းများတွင်အကောင်းဆုံး Forex Trading App ကိုမည်သို့ရွေးချယ်ရမည်ကိုအသေးစိတ်ခြုံငုံသုံးသပ်ထားသည်။ ကျနော်တို့အသေးစိတ်အသေးစိတ်စည်းမျဉ်း, ကော်မရှင်, အခကြေးငွေနှင့်အလုံးစုံစွမ်းဆောင်ရည်အဖြစ်အချက်များဆွေးနွေးပါလိမ့်မယ်။
အနည်းဆုံးတော့သင့်ရဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုလိုအပ်တယ်။ သင်တက်ဘလက်၊ ဖုန်းနှင့်ကွန်ပျူတာတစ်ခုအကြားပြောင်းလဲနေပါကသင်အားကစားနည်းအားလုံးတွင်ချောမွေ့စွာတွေ့ကြုံခံစားနိုင်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုလိုအပ်သည်။
2. ကုန်သွယ် app ကို Instal
အကောင်းဆုံးကုန်သွယ်ရေးအက်ပ်ကိုရှာခြင်းသည်လုပ်ငန်းစဉ်၏အခက်ခဲဆုံးအပိုင်းဖြစ်သည်။ ကျန်တဲ့ဖုန်းတွေကတခြား app app တွေလိုပဲချောမွေ့စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကုန်သွယ်ရေးဆိုဒ်အများစုတွင်သင့်အားသူတို့၏တရားဝင်အက်ပလီကေးရှင်းများသို့သင့်အားလမ်းကြောင်းပြောင်းပေးသည့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှုများရှိသည်။ မဟုတ်ပါက၎င်းကို Android သို့မဟုတ် iOS app စတိုးများမှတဆင့်ရှာဖွေနိုင်သည်။
ယခုအချိန်တွင်သင်သည်လိုင်စင်ရထားသောမူရင်းနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများ၏မူကွဲကိုကူးယူနေကြောင်းသေချာစေသင့်သည်။ ထိုသို့သောကုန်သွယ်ရေးအက်ပ်များ၏အတုပုံစံများသို့မဟုတ်အတုဗားရှင်းများကိုတွေ့ရခြင်းသည်အဆန်းမဟုတ်ပါ။ သင်၏အခြေခံအားဖြင့်သင်၏အရင်းအနှီးအားအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုလက်သို့အပ်နှံထားခြင်းဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည် app ၏စစ်မှန်သောမူကွဲမှတစ်ဆင့်သင်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုသေချာစေရန်လိုအပ်သည်။
သင်သည်အက်ပ်ကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ပြီးလျှင်နောက်အဆင့်တစ်ခုမှာသင်၏အကောင့်ကိုဖွင့်ရန်ဖြစ်သည်။
သင့်တွင်သက်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးဆိုဒ်နှင့်အကောင့်တစ်ခုရှိပြီးဖြစ်ပါကသင်၏အထောက်အထားများနှင့်သာသင်သာဝင်ရမည်။ မရရှိပါကသင်သည်ပွဲစား ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်။
သင်၏အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်စကားဝှက်အပြင်ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများအနေဖြင့်လည်းသင်၏အမည်အပြည့်အစုံ၊ အိမ်လိပ်စာ၊ မွေးသက္ကရာဇ်နှင့်ဖုန်းနံပါတ်စသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုပေးရန်လိုအပ်သည်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့သင်သည်အခွန်မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ကိုလည်းပေးရလိမ့်မည်။
ကုန်သွယ်မှု site ပေါ် မူတည်၍ အသုံးပြုသူများသည်သူတို့၏အလုပ်အကိုင်အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလည်းပေးရမည်။ သင်၏နှစ်ပတ်လည်လစာနှင့်သင်၏စက်မှုလုပ်ငန်းကိုပါဖော်ပြမည့်သတင်းအချက်အလက်လိုအပ်လိမ့်မည်။
အရေးကြီးသည်မှာပွဲစား ၀ က်ဘ်ဆိုက်များသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနယ်ပယ်၌သင်၏အတွေ့အကြုံနှင့် ပတ်သက်၍လည်း သိရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်ပံ့ပိုးသူအားသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုခြုံငုံ။ သင်၏သင်အံဝင်ဂွင်ကျပမာဏကိုဖော်ပြပေးသည်။
မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည်သင်၏တိုင်းပြည်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဥပမာဗြိတိန်တွင်ပွဲစားများသည်ဖောက်သည်တစ် ဦး နှင့်စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုတွင် ၀ င်ရောက်ခြင်း၏ဝိသေသလက္ခဏာနှင့်ကိုက်ညီမှုကိုစစ်ဆေးရန်ပွဲစားများသည်သိထားသင့်သည့်သင်၏ဝယ်သူ (KYC) ဟုခေါ်သောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလိုက်နာရမည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုလွယ်ကူပြီးထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်။ သင်လုပ်ရန်မျှော်လင့်ထားသည်မှာတိုင်းပြည်တွင်တရားဝင်ဖြစ်သောအစိုးရမှထုတ်ပေးသော ID ကိုပေးပြီးစာရွက်စာတမ်းကိုတင်ပါ။ ကုန်သွယ်ရေးအက်ပ်အချို့သည်သင်၏လိပ်စာကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သကဲ့သို့၊ ငှားရမ်းခ၊ ငွေတောင်းခံလွှာသို့မဟုတ်ဘဏ်ငွေစာရင်းစသည့်ထပ်ဆောင်းစာရွက်စာတမ်းများကိုသင်လိုအပ်ပေမည်။
ကုန်သွယ်ရေးအက်ပလီကေးရှင်းအများစုကိုရရှိရန်သင်၏ကုန်သွယ်မှုအကောင့်တွင်ငွေအရင်းအနှီးလည်းထည့်ထားရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏အကောင့်ကိုကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းမှသေချာစွာစစ်ဆေးပြီးမှသာပြုလုပ်နိုင်သည်။ ပြီးတာနဲ့သင်လွယ်ကူစွာပိုက်ဆံထည့်နိုင်သည်။
အကောင်းဆုံး Forex Trading အက်ပလီကေးရှင်းများသည်သုံးစွဲသူများအတွက်ငွေပေးချေမှုနည်းစနစ်အမျိုးမျိုးကိုပေးသည်။ ၎င်းတွင်အကြွေးကဒ်သို့မဟုတ်ဒက်ဘစ်ကဒ်ငွေပေးချေခြင်း၊ e-wallets သို့မဟုတ်ငွေလွှဲခြင်းများပါ ၀ င်သည်။
၆။ App ကိုစတင်ရောင်းဝယ်ပါ
သင်၏အကောင့်တွင်လုံလောက်သောလက်ကျန်ငွေရှိပါကယခုသင်ကျန်ရှိနေသောအရာအားလုံးသည်ငွေကြေးအတွဲများကို ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းဖြစ်သည်။ ကုန်သွယ်ရေးအက်ပလီကေးရှင်းများသည်ပစ္စည်းတစ်ခုထက်မကကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးသောကြောင့်၊ ရှာဖွေရေးလုပ်ဆောင်ချက်ကို အသုံးပြု၍ သင်ကြိုက်နှစ်သက်မှုကိုရှာနိုင်သည်။ သီးခြား Forex အရောင်းအ ၀ ယ်များအတွက် USD / EUR ကဲ့သို့သောငွေကြေးအတွဲများကိုသင်ထည့်နိုင်ပြီးသင့်ကိုသက်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးစာမျက်နှာသို့ပြန်သွားမည်။
အကယ်၍ သင်သည်အစပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်ပါကပိုမိုကြီးမားသောအရောင်းအ ၀ ယ်များသို့မသွားမီသေးငယ်သောဂိုဏ်းဂဏများဖြင့်အရောင်းအ ၀ ယ်ကိုအမြဲတမ်းလုပ်ရန်အကြံပြုသည်။ သင် app ကိုအကျွမ်းတဝင်ရှိပြီး Forex trading နှင့်အတွေ့အကြုံရှိပါကသင်၏လောင်းကြေးကိုတိုးမြှင့်ခြင်းကိုသာစဉ်းစားသင့်သည်။
အကောင်းဆုံး Forex Trading Apps များကိုမည်သို့ရှာဖွေရမည်နည်း။
အကောင်းဆုံးသော forex trading app သည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုပန်းတိုင်များနှင့်အတွေ့အကြုံပေါ်တွင်မူတည်လိမ့်မည်။ အစပြုသူများမှရိုးရှင်းသောအက်ပလီကေးရှင်းများကိုပိုမိုနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းနိုင်သော်လည်းအတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များကစျေးကွက်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုတိုးမြှင့်ပေးသည့်ခေတ်မီဆန်းပြားမှုကိုရှာဖွေနေကြလိမ့်မည်။
သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသောအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုရှာဖွေရန်သင်ရုန်းကန်နေပါကသင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ရန်လိုအပ်သည့် attribute အချို့ကိုဤတွင်တွေ့နိုင်သည်။ အချိန်လွတ်လပ်ခွင့်မရှိသောသူများအတွက်လည်းကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးကြသည် ကျွန်တော်တို့၏ ဤစာမျက်နှာ၏အဆုံးဆီသို့ ဦး တည် Forex trading အက်ပလီကေးရှင်းများ။
၁။ ဒီ app ဟာသဟဇာတဖြစ်ပါသလား။
အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းသင်ကုန်သွယ်ရေးအက်ပလီကေးရှင်းကိုရှာဖွေရခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာအဆင်ပြေမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်ရရှိနိုင်သောပစ္စည်းနှင့်မကိုက်ညီပါကသင်ရွေးချယ်ထားသော forex ပွဲစား၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ဗားရှင်းနှင့်ကပ်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
တောက်ပသည့်ဘက်တွင်တည်ထောင်ထားသောကုန်သွယ်ရေးဆိုဒ်အများစုသည် Android နှင့် iOS ထုတ်ကုန်များနှင့်သဟဇာတဖြစ်သောအက်ပလီကေးရှင်းများတီထွင်လိမ့်မည်။ သို့သော်၊ အကယ်၍ သင်သည်အခြားရွေးချယ်စရာ operating system တစ်ခုအသုံးပြုနေပါကသင်ကံမကောင်းဖြစ်မည်။
မည်သည့်ကုန်သည်အတွက်မဆိုကုန်သွယ်ရေးနေရာရွေးချယ်ရာတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်ပထမဆုံးမက်ထရစ်သည်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုဖြစ်သည်။ ပွဲ ဦး ထွက်တွင်ပွဲစားများကစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည့်လိုင်စင်ရအဖွဲ့များဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ယူကေရှိပလက်ဖောင်းများကို FCA မှထိန်းချုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ သြစတြေးလျတွင် ASIC၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင် CySEC၊ ဂျာမနီရှိ BaFin စသည်ဖြင့်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ ကုန်သွယ်ရေးအက်ပ်သည်သူတို့၏လိုင်စင်အဖွဲ့များကိုမီးမောင်းထိုးပြပါကသင်၏ပထမဆုံးအလံနီဖြစ်သင့်သည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင်၊ သင်သည်ဤပလက်ဖောင်းများမှတဆင့်များစွာသောကုန်သွယ်မှုပြုနေသည့်အခါသင်၏ငွေနှင့်အကျိုးစီးပွားများကိုအကာအကွယ်ပေးရန်သင့်တာ ၀ န်ရှိသည်။ သင်ကုန်သွယ်ရေးအက်ပ်တွင်ဤအချက်အလက်ကိုမတွေ့ပါကထိန်းညှိသူ၏မှတ်ပုံတင်သည်အမြန်ရှာဖွေခြင်းဖြင့်၎င်းကိုအတည်ပြုနိုင်လိမ့်မည်။ မရရှိလျှင်ပလက်ဖောင်းနှင့်၎င်း၏သက်ဆိုင်ရာ app ကိုရှောင်ကြဉ်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ကုန်သွယ်ရေးဆိုဒ်များနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများသည်ကန ဦး အပ်ငွေပမာဏနှင့်သင်မည်သို့ပြုလုပ်နိုင်သည်နှင့် ပတ်သက်၍ သီးခြားမူဝါဒများရှိသည်။ ယနေ့ခေတ် desktop desktop များနှင့်မတူသည်မှာဖုန်းအက်ပလီကေးရှင်းများသည် Google နှင့် Apple ပေးဆောင်ခြင်းဖြင့်ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံသည်။
အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်၎င်းကိုအကြွေးဝယ်ကဒ်သို့မဟုတ်ဘဏ်အကောင့်အပ်ငွေများထက်ပိုနှစ်သက်သည် - အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အပလီကေးရှင်းကိုအထိခိုက်မခံသောငွေကြေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာအချို့ကုန်သွယ်ရေးဆိုဒ်များသည် PayPal သို့မဟုတ် Neteller ကဲ့သို့သော e-wallets များကိုအထောက်အပံ့ပေးသည်။ သငျသညျသငျသညျအခကြေးငွေစွဲချက်ရှိမရှိကိုလည်းသင်စစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။
ကုန်သွယ်ရေးအက်ပ်များသည် Forex အတွက်သာမကအခြားဘဏ္instrumentာရေးဆိုင်ရာကိရိယာများအတွက်လည်းရရှိနိုင်သည်။ အသစ်သောကုန်သွယ်ရေးအက်ပလီကေးရှင်းများသည်များသောအားဖြင့် Forex ကိုသာမှီခိုနေခြင်းမဟုတ်ဘဲများသောအားဖြင့်ပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းများစွာကိုဖြေရှင်းသည်ကိုသင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်။ သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်မချမီကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းမှမည်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုပိုင်ဆိုင်သည်ကိုသင်ရှာဖွေနိုင်သည်။
ထို့အပြင်ဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာတစ်ခုချင်းစီတွင်ရရှိနိုင်သည့်အမျိုးမျိုးသောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုလည်းသင်လေ့လာရမည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Forex trading app များသည်အဓိကစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်သာအထောက်အပံ့ပေးသော်လည်းအခြားသူများကမူသင့်အားအရွယ်မရောက်သေးသောသူများနှင့် exotics များစွာကိုလက်လှမ်းမီသည်။
ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများသည်ကော်မရှင်များမှလည်းကောင်း၊ ပျံ့နှံ့ ထို့ကြောင့် - ရောင်း ၀ ယ်ခြင်းအမိန့်တစ်ခုစီ၏အပိုင်းအစတစ်ခုသည်သက်ဆိုင်ရာပလက်ဖောင်းသို့သွားသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, ငါnvestors များသည်တင်းကျပ်သောပြန့်ပွားမှုကမ်းလှမ်းသောကုန်သွယ်ရေးအက်ပ်များကိုရှာဖွေရမည်။ ဤသည်တောင်းဆိုနေတာစျေးနှုန်းနှင့်ရောင်းစျေးနှုန်းအကြားကွာဟချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြန့်ပွားမှုနိမ့်သည်နှင့်အမျှသင်၏အမြတ်အစွန်းများများများများရရန်သင်ရနိုင်သည်။
အချို့သောကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများသည်ကော်မရှင်မရှိသော်လည်းပြန့်ပွားမှုနှုန်းအနည်းငယ်မြင့်တက်သွားသည်။ ထို့ကြောင့်ပြန့်ပွားနှုန်းကိုချိန်။ နှိုင်းယှဉ်ရန်နှင့်ကော်မရှင်တခုခုအားကောက်ခံသည်ဖြစ်စေမသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ထို့အပြင်သင် Forex တည်နေရာကိုဖွင့်ထားသည့်နေ့တိုင်းအတွက်နေ့ချင်းညချင်းငွေပေးချေရသည်။
အသုံးပြုသူများစွာအတွက် app ၏ interface သည်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ in မှပါ ၀ င်သည်။ အကောင်းဆုံး Forex trading အက်ပလီကေးရှင်းများသည်အဆင့်မြင့်အင်္ဂါရပ်များနှင့်ကိရိယာများပါ ၀ င်သော်လည်း၎င်းသည်အသုံးပြုသူနှင့်မရင်းနှီးပါကရှောင်ရှားသင့်သည်။ သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဟာဗျူဟာများတိုးတက်ရန်သင်၏အချိန်ကိုဖြုန်းတီးမည့်အစား၊ အက်ပလီကေးရှင်းမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုလေ့လာခြင်းအတွက်အချိန်ဖြုန်းခြင်းခံရလိမ့်မည်။
အလားတူစွာ၊ အကယ်၍ app သည်လက်ရှိစျေးကွက်ပေါက်စျေးကိုကြည့်ရှုရန်သာခွင့်ပြုပါကကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ရန်အတွက် desktop ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ app သည်သင်၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့်မကိုက်ညီပေ။ နောက်ဆုံးတွင်၊ သင်သည်သင်၏ဖုန်းမျက်နှာပြင်နှင့်အဆင်ပြေစွာအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးပိုင်ဆိုင်မှုမှပိုင်ဆိုင်မှုသို့ချောမွေ့စွာကူးပြောင်းခြင်းပေးသော interface တစ်ခုကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါက app သည်အသုံးပြုသူနှင့်အဆင်ပြေကြောင်းသေချာပါစေ။
အကယ်၍ ကုန်သွယ်မှု site တွင်ယုံကြည်စိတ်ချရသော client support အဖွဲ့ရှိပါက app မှတဆင့်အလားတူ ၀ န်ဆောင်မှုမျိုးကိုမျှော်လင့်သင့်သည်။ ၎င်းသည်ရှေ့တန်းမှတိုက်ရိုက်စကားပြောစက်မှတစ်ဆင့်အထောက်အကူပြုကိုယ်စားလှယ်နှင့်စကားပြောနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပွဲစားကိုခေါ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
MT4 Trading အက်ပ်ကိုဘာကြောင့်သုံးသင့်သလဲ။
MetaTrader4 သည်အတွေ့အကြုံအရှိဆုံးကုန်သည်များအတွက်သေတ္တာထဲတွင်အပြောင်မြောက်ဆုံးကိရိယာဖြစ်လာသည်။ ၎င်းသည်ဘဏ္instrumentsာရေးဆိုင်ရာကိရိယာအားလုံးတွင်ကုန်သွယ်မှုအတွက်အသုံးချသော်လည်း Forex နှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ MT4 သည်လူကြိုက်များပြီးလူကြိုက်များသောကုန်သွယ်ရေးအကြိုက်များကိုလွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ software သည်အသုံးပြုသူများအား algorithms နှင့် autonomous robots များအပေါ် အခြေခံ၍ သူတို့၏ကုန်သွယ်မှုကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဤနည်းအားဖြင့် software သည်သင် MT4 မှတစ်ဆင့်သတ်မှတ်ထားသောသတ်မှတ်ချက်အရနေရာများကိုအလိုအလျောက်ဖွင့ ်၍ ပိတ်လိမ့်မည်။
ထို့အပြင်စျေးနှုန်းအတက်အကျများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးကုန်သွယ်ရေးဂရပ်များကိုအနက်ဖွင့်နိုင်သည်။ MT4 သည်ဝေးလံခေါင်ဖျားသောရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုမဟာဗျူဟာများအားလုံးလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်ကူညီနိုင်သောလိုအပ်သည့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤအချက်ကိုစဉ်းစားသင့်သည်။
MT4 forex trading app ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အင်္ဂါရပ်များမှာ -
ကုန်သွယ်မှုများကိုချက်ချင်း ဝင်၍ ထွက်ရန်ခွင့်ပြုသည်
ငွေကြေးအတွဲ၏သမိုင်းကို download လုပ်ပါ
desktop ဗားရှင်းများ၏မီးမောင်းထိုးပြသောအင်္ဂါရပ်အားလုံးပါ ၀ င်သည်
အရေးကြီးသည်မှာ MT4 အက်ပလီကေးရှင်းသည်ကုန်သွယ်မှုနှင့်နည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုသေးငယ်သည့်မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားကြောင့်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေရန်သေချာစေသည်။
Trading App တွင်ရနိုင်သောပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားများ
မိုဘိုင်းကုန်သွယ်ရေးအက်ပ်များသည်သင့်အားသက်ဆိုင်ရာပွဲစား ၀ က်ဘ်ဆိုက်များမှတဆင့်ရရှိနိုင်သောဘဏ္instrumentsာရေးတူရိယာများနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားသည် Forex ဖြစ်သော်လည်းသင်ရရှိနိုင်သောအခြားဘဏ္otherာရေးဆိုင်ရာကိရိယာများကိုလေ့လာသင့်သည်။
တစ် ဦး ချင်းစီ၏အစုရှယ်ယာများသည်အများပိုင်ကုမ္ပဏီများတွင်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုကိုယ်စားပြုသောရှယ်ယာများဖြစ်သည်။ ဤရှယ်ယာများ၏အရောင်းအ ၀ ယ်များသည်ကမ္ဘာအနှံ့စတော့အိတ်ချိန်းများမှတဆင့်လွယ်ကူချောမွေ့သည်။ ဤရှယ်ယာများ၏တန်ဖိုးတစ်ခုတန်ဖိုးထားသို့မဟုတ်တန်ဖိုးရှိသည့်အခါသင်အမြတ်အစွန်း။
ထို့ကြောင့်သာတူညီမျှမှုသည်အခြေခံကုမ္ပဏီ၏အနေအထားကိုအကျိုးသက်ရောက်စေမည့်အဖြစ်အပျက်များနှင့်သတင်းများနှင့်လည်းညီမျှမှုရှိသည်။ အကယ်၍ သင်သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရှယ်ယာများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုပါကမိုဘိုင်းကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းသည်သင့်အားတိကျသောလဲလှယ်မှုတစ်ခုသို့ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးဖို့လိုသည်။
သင်တို့အပေါ်မှာထင်ကြေးဖို့လိုအပ်တဲ့အတွေ့အကြုံရှိသည်မဟုတ်လျှင် တစ်ဦးချင်းစီ ညီမျှခြင်းတွေဆိုတော့နောက်ရွေးချယ်စရာအကောင်းဆုံးကညွှန်းကိန်းတွေပေါ့။ ဤရွေ့ကားအုပ်စုတစ်စုအဖြစ် basketed ကွဲပြားခြားနားသောကုမ္ပဏီများ၏စတော့ရှယ်ယာဖြစ်ကြသည်။ အုပ်စုတစ်ခုစီသည်သူတို့၏စက်မှုလုပ်ငန်းကို အခြေခံ၍ များသောအားဖြင့်အတူတကွခွဲခြားထားသောကုမ္ပဏီအမြောက်အများရှိလိမ့်မည်။
ညွှန်းကိန်းများကိုအရောင်းအဝယ်ပြုခြင်းအားဖြင့်သင်ဟာကုမ္ပဏီရဲ့တစ်ခုတည်းထက်ပြည်တွင်းစတော့အိတ်ဈေးကွက်မှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ သို့သော်ကဏ္ sector တစ်ခု၏ရှယ်ယာတွင်သိသာစွာကွဲပြားမှုသည်ကျန်သောအညွှန်းကိန်းများအထူးသဖြင့်၎င်း၏နည်းပညာသည်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုသတိပြုပါ။
အိတ်ချိန်းကုန်သွယ်ရန်ပုံငွေများသည်အစုရှယ်ယာများနှင့်ဆင်တူသည်၊ သို့သော်များသောအားဖြင့်မတူကွဲပြားသောပိုင်ဆိုင်မှုများဖြင့်ကုန်သွယ်သည်။ ETFs များ၏တန်ဖိုးသည်ခြေရာခံသည့်အခြေခံပိုင်ဆိုင်မှုများပေါ် မူတည်၍ တစ်နေ့လုံးပြောင်းလဲသွားသည်။ ထို့ကြောင့်ကုန်သွယ်ရေးနေ့တစ်လျှောက်လုံးရှည်လျား။ တိုတောင်းသောအခွင့်အလမ်းများစွာရှိသည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်ကုန်သွယ်ရေးအက်ပ်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်မှတ်သားလောက်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်ပိုင်ဆိုင်မှုများမည်သို့လုပ်ဆောင်နေသည်ကိုသင်အမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နိုင်သည်။
ကုန်ပစ္စည်းများကိုစွမ်းအင်၊ သတ္တုနှင့်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်များဖြစ်သောကဏ္ three သုံးခုခွဲခြားထားသည်။ ထိုဈေးနှုန်းများသည်တစ်နေ့တာလုံးသိသိသာသာကွဲပြားလိမ့်မည်။ ကုန်သွယ်ရေးအက်ပလီကေးရှင်းအများစုသည်သင့်အားကုန်ပစ္စည်းတူရိယာများစွာကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးသည်။ ၎င်းတွင်ပါဝင်နိုင်သည် ရှေ, ဆီ, ဓာတ်ငွေ့နှင့်ဂျုံ။
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်မှုနယ်ပယ်၌ cryptocurrencies လူကြိုက်များခဲ့သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် developer များနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် crypto trading industry အတွက်သီးသန့် app များဖန်တီးရန်စိတ်အားထက်သန်ကြသည်။
ကုန်သွယ်ရေးဆိုဒ်တိုင်းကဒီဒိုမိန်းထဲကို ၀ င်မလာသေးဘူး။ ရိုးရာပွဲစားများသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးဖြင့်ကုန်သွယ်မှုပြုရန် CFDs ကိုအားထားလေ့ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, သငျသညျသို့ရချင်လျှင် cryptocurrency ကုန်သွယ်, သင်သည်သြဇာနှင့်တိုတောင်းရောင်းအားအဆောက်အ ဦ မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်လိမ့်မယ်။
2021 နှင့် 2022 ၏ အကောင်းဆုံး Forex ကုန်သွယ်မှုအက်ပ်များ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့နက်ရှိုင်းသောလမ်းညွှန်၏ဤအချက်အထိ Forex အက်ပလီကေးရှင်းတွင်မည်သည့်အရာကိုကြည့်ရှုရမည်ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ သို့သော်လူတိုင်းကမှန်ကန်သောအရာကိုရှာရန်အချိန်အလုံအလောက်မတတ်နိုင်ကြပါ။
ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ အခကြေးငွေများနှင့်အသွင်အပြင်များ၏ရှုထောင့်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးနောက် - သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိုအပ်ချက်အားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးမည့်ကောင်းမွန်သောအရောင်းအ ၀ ယ်အက်ပလီကေးရှင်းငါးခုစာရင်းကိုကျွန်ုပ်တို့စုစည်းထားသည်။
သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိုအပ်ချက်များအားလုံးအတွက်တစ်နေရာတည်းတွင်ရပ်နားရန်ရှာဖွေနေသည်ဆိုလျှင် AVATrade သည်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုတရား ၀ င်တရားစီရင်မှုများရှိစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းသည်အွန်လိုင်းအာကာသထဲတွင်အများဆုံးတည်ထောင်ထားသောပွဲစားများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၂၀၀၆ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင်စတင်လည်ပတ်ခဲ့သည်။ ဆိုက်သည်သင့်အားငွေကြေးပြည့်စုံသော Forex နယ်ပယ်အပါအ ၀ င်ငွေကြေးတူရိယာ ၂၅၀ ကျော်ကိုလက်လှမ်းမီစေသည်။
AVATrade ကို desktop, tablet နှင့် mobile device များ၌ရရှိနိုင်ပါသည်။ တစ်ခုချင်းစီတွင် user-friendly interface နှင့်ဆန်းသစ်သော features များပါ ၀ င်သည်။ သင်၏မိုဘိုင်းဖုန်းမှတစ်ဆင့်သင်ဝင်ရောက်နိုင်သည့်သီးသန့် AVATrade ဝက်ဘ်ရောင်းဝယ်သူနှင့်အတူ MT4 နှင့် MT5 တို့ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ပလက်ဖောင်းသည်အထူးသဖြင့်ချောမွေ့သောမိုဘိုင်းကုန်သွယ်မှုအတွေ့အကြုံနှင့်ပတ်သက်လျှင်အထူးသဖြင့်နေရာဒေသအားလုံးတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ကုန်သွယ်ရေးအက်ပလီကေးရှင်းများသည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောပရိသတ်အတွက် Forex ၏နယ်ပယ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့သည်။ The Forex ဈေးကွက် များစွာသောကုန်သည်များအတွက်အသစ်ဖြစ်နေသေးသော်လည်းတူညီသောအကြောင်းပြချက်များအရဤကုန်သွယ်ရေးအက်ပ်များမှရရှိသောအရင်းအမြစ်များစွာသည်စိတ် ၀ င်စားမှုကိုမြှင့်တင်ရန်အလွန်ဖြစ်နိုင်သည်။
အကယ်. သင်က ရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ကိုအပြည့်အစုံဖတ်ပါ - သင်ပြောင်းရွှေ့ရန်ကုန်သွယ်ရန်ခွင့်ပြုသည့်အကောင်းဆုံး Forex trading အက်ပလီကေးရှင်းများကိုသင်ယခုတွေ့ရှိနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် app တစ်ခုချင်းစီသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်လိုအပ်ချက်များအတွက်အလုပ်လုပ်ရန်နှင့်သင်ရွေးချယ်ထားသောပလက်ဖောင်းသည်လိုင်စင်လုပ်ထားရန်၊ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောအခကြေးငွေများနှင့်စိတ်ချရသောဖောက်သည်များ၏ပံ့ပိုးမှုများကိုသေချာစေရန်လိုအပ်သည်။
အရောင်းအ ၀ ယ်ဆိုဒ်များနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများသည်ငွေပေးချေမှုများကိုနည်းလမ်းများစွာမှလက်ခံသည်။ ထင်ရှားသောအက်ပလီကေးရှင်းအားလုံးနီးပါးတွင်ဘဏ်ကတ်များ၊ အီး - ပိုက်ဆံအိတ်များသို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်ငွေလွှဲခြင်းဖြင့်ငွေလွှဲပြောင်းရန်ရွေးချယ်စရာများရှိသည်။ မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းကိုငွေသွင်းရန်အသုံးပြုပါကသင်နှင့်ဂူဂဲလ်နှင့်အက်ပလီကေးရှင်းတို့ကိုလည်းပေါင်းနိုင်သည်။
ကုန်သွယ်ရေးအက်ပ်များမှပေးသောသြဇာများသည်ပွဲစားတစ်ယောက်နှင့်တစ်ခုကွဲပြားနိုင်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်၊ သြဇာအကန့်အသတ်သည်တည်နေရာ၊ သင်၏ကုန်သွယ်မှုအတွေ့အကြုံနှင့်စွန့်စားမှုစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးဆိုဒ်များပေါ်မူတည်သည်။
ကုန်သွယ်ရေးဆိုဒ်အများစုတွင်သုံးစွဲသူများသည်အနည်းဆုံးအကောင့်လက်ကျန်ငွေကိုထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သည်။ ဒါကဘယ်နေရာမှာမဆိုဒေါ်လာ ၁၀၀ (သို့) ထိုထက်မကနေဖြစ်နိုင်တယ်။
ယခုအချိန်တွင်ကုန်သွယ်ရေးအက်ပလီကေးရှင်းများကို Android နှင့် iOS ကိရိယာများသာအသုံးပြုရန်တီထွင်ထားသည်။
ငါကုန်သွယ်ရေး site ကိုသုံးပြီးပြီ, သူတို့ရဲ့မိုဘိုင်း app ကိုဘယ်လိုရှာနိုင်မလဲ
အကယ်၍ သင်ရွေးချယ်လိုက်သောပွဲစားတွင်မိုဘိုင်းကုန်သွယ်ရေးအက်ပလီကေးရှင်းရှိပြီးသားဖြစ်ပါက၎င်းသည်၎င်း၏အဓိက desktop ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့် link တစ်ခုကိုတွေ့လိမ့်မည်။ မရရှိလျှင်သင်သည် app app store ရှိရှာဖွေမှုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်တရား ၀ င်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအတုမဟုတ်ဘဲသေချာသည်။
ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုဒ်များသည်ရံဖန်ရံခါတွင် sign up bonus များပါ ၀ င်သည်။ အကယ်၍ ပွဲစားကုမ္ပဏီမှကြိုဆိုသောပရိုမိုးရှင်းများသို့မဟုတ်အပိုဆုကြေးများကိုကမ်းလှမ်းပါက app သည်သင်နှင့်အတူတူပင်အင်္ဂါရပ်ကိုပေးလိမ့်မည်။